Onye na-azọ ọkwa onyeisiala ji okolata APC bụ Bola Tinibu kelere President Buhari maka ọpụrụiche ya. – Igbo Services
Onye na-azọ ọkwa onyeisiala ji okolata APC bụ Bola Tinibu kelere President Buhari maka ọpụrụiche ya.
By Chigo	 Last updated Jun 20, 2022
Onye ndoro-ndoro ochichi nke All Progressives Congress (APC), Bola Tinubu, akọwawo President Muhammadu Buhari dị ka “ezigbo onye ndu, nwanne na enyi” nke gosipụtara “echiche nke nzube, obi iru ala, na ntozu okè” n’ime izu ndị na-eduga na Pụrụ Iche. Mgbakọ nke Party.
N’akwụkwọ ozi o degaara Onye isi ala, bụ nke ya n’onwe ya binyere aka, Tinubu gosipụtara obi ụtọ maka akwụkwọ ozi ekele Onye isi ala degara ya, na-agbakwụnye na ebe ndị niile na-asọmpi na-atụ anya ka President Buhari “họpụta” onye ga-anọchi ya, ọ na-ahapụ nanị ohere egwuregwu.
Dị ka ya si kwuo, “Ị bụ nke onye ọ bụla na pati ahụ, ọ dịghịkwa onye ọ bụla n’ime ndị na-azọ ọkwa pati ahụ.”
Ọ kelere Onye isi ala maka mmechi nke Mgbakọ ahụ nke ọma ma mesie ya obi ike maka mgbasa ozi lekwasịrị anya nke na-eduga na ntuli aka izugbe 2023.
Naijiria ga-ewepụta usoro iji merie ihe ịma aka nchekwa – Onyeisiala Buhari.
Naijiria hibere ebe ịdọ aka na ntị mbụ.